Hajan’ny Gasy: namoaka ny “Fandresena” ny any Vakinankaratra | NewsMada
Hajan’ny Gasy: namoaka ny “Fandresena” ny any Vakinankaratra
Notanterahina ny 12 janoary teo, tao Amberobe Andranomanelatra ny lanonana famoahana tamim-pomba ofisialy ireo mpianatra kabary, teo anivon’ny fikambanana Hajan’ny Gasy, sampana Vakinankaratra. Nisalotra ny anarana “Fandresena” ity andiany itty, ahitana mpiofana miisa 30 mianadahy. Notoloran’ny fikambanana mari-pahaizana avy izy ireo.
Tsy mitsaha-miitatra ny sahan’ny fampianarana kabary eo anivon’ny fikambanana Hajan’ny Gasy, ho an’ny tao Vakinankaratra, tao an-dRenivohitra ihany no nisy fanofanana hatramin’izay, saingy nanomboka tamin’ny taon-dasa, niitatra tsikelikely any amin’ny faritra manodidina an’Antsirabe izany. Marihina fa lohalaharana aloha, hatreto ny ao Vakinankaratra amin’ity fampitana fahaizana mikabary ity, satria avy ao ny filoha mpanorina ny fikambanana, Rahajason Honoré.
Mikasika ny lanonana notanterahina tao Andranomanelatra, nambaran’ny filohan’ny Hajan’ny Gasy fa avy amin’ny kaominina dimy ( Antsoantany, Andranomanelatra, Ambohimirivo, Ambatolahy, ary Ambatomena Soanindrariny) ireo mpiofana nivoaka ireo. Nasongadina manokana, tamin’ity fotoana ity, ny maha Malagasy, tamin’ny alalan’ny don-tany sy kapo-tandroka, seho an-tsehatra, antsa tononkalo sy ny maro hafa. Nanome voninahitra sy nanotrona izany ny vahiny avy ao an-tampon-tanànan’Antsirabe.
Vaovaobe hoentin’ity taona 2019 ity ny fisokafan’ny fianarana kabary any amin’ny faritra Bongolava. Tsiahivina fa sivy taona moa izay ny nijoroan’ny Hajan’ny Gasy, izay mijoro amin’ny teny faneva hoe: « Reharehako ny maha Gasy ahy» ry zareo.